Aza Manahy Be Loatra! | Matio 6:25 | Torohevitry ny Baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bassa (Cameroun) Batak (Toba) Bengali Bichlamar Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cinghalais Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Garifuna Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kabiyè Kamba Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikongo Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mixe (Afovoany) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ngabere Ngangela Norvezianina Nyaneka Nzema Oromo Ossète Otetela Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pidgin (Cameroun) Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sena Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tigrigna Tiorka Tojolabal Tok Pisin Totonac Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Vietnamianina Wallis Wolaita Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
TORO LALAN’NY BAIBOLY: “Aza manahy intsony ny amin’ny ainareo.”—Matio 6:25.
Inona no dikan’izany? Tamin’ilay Toriteny teo An-tendrombohitra i Jesosy no niteny an’ireo. Ilay matoanteny grika nadika hoe “aza manahy”, dia azo ilazana ny “zavatra tsapan’ny olona isan’andro momba ny fahantrana sy ny hanoanana ary ny olana hafa mahazo azy.” Ny zavatra hitranga amin’ny hoavy matetika no mampanahy ny olona. Ara-dalàna ianao raha manahy momba ny zavatra ilainao sy izay hahasoa ny fianakavianao sy ny olon-kafa akaiky anao. (Filipianina 2:20) Rehefa nilaza anefa i Jesosy hoe “aza manahy intsony”, dia te hiteny izy hoe aza manahy be loatra. Tsy hahafinaritra mantsy ny fiainana raha manahy be loatra ny amin’izay hitranga ny ampitso isika.—Matio 6:31, 34.
Mbola azo ampiharina ve izany? Hendry isika raha manaraka ny torohevitr’i Jesosy. Nahoana? Misy boky milaza fa rehefa manahy be loatra ny olona iray, dia miasa be foana ny rafi-pitatitra ao aminy, ka lasa “marary vavony, ohatra, izy na voan’ny aretim-po na asma.”
Inona no maharatsy ny hoe manahy be loatra, araka ny nolazain’i Jesosy? Tsy mitondra mankaiza ilay izy. Hoy izy: “Iza aminareo no mahay manalava ny androm-piainany, na kely monja aza, rehefa manahy?” (Matio 6:27) Raha manahy be loatra isika, dia tsy hoe hitombo akory ny halavan’ny androm-piainantsika, na dia ampahan-tsegondra fotsiny aza. Tsy hanatsara ny fiainantsika mihitsy koa izany. Tsy araka ny nieritreretantsika azy koa matetika ny zava-mitranga. Hoy ny manam-pahaizana iray: “Reraka eo fotsiny ianao raha manahy be hoe inona no hitranga, satria matetika no tsara kokoa fa tsy araka ny nieritreretanao azy ny zava-misy.”
Inona àry no hanampy antsika tsy hanahy be loatra? Voalohany, matokia an’Andriamanitra. Ny vorona aza mantsy omeny sakafo ary ny voninkazo ampanaoviny fitafiana tsara tarehy, koa mainka fa ny mpanompony? Azo antoka fa hahazo izay ilainy eo amin’ny fiainana koa izy ireo, satria miezaka manao loha laharana ny sitrapony. (Matio 6:25, 26, 28-30) Faharoa, ny androany ihany aloha eritreretina. Nilaza i Jesosy hoe: “Aza manahy mihitsy ny amin’ny ampitso, fa ny ampitso hanana ny fanahiany.” Tsy manaiky ve ianao fa efa “ampy ho an’ny andro tsirairay ny ratsy mitranga eo aminy”?—Matio 6:34.
Hisoroka olana maro isika, raha manaraka ny torohevitr’i Jesosy. Hilamin-tsaina koa isika, izany hoe hanana an’ilay antsoin’ny Baiboly hoe “fiadanan’Andriamanitra.”—Filipianina 4:6, 7.
Hizara Hizara Aza Manahy Be Loatra!
Fanazavana ny Matio 6:34: “Aza Manahy ny Amin’ny Ampitso”